Maskiri.* Rwiyo rwaAsafi.+ 78 Imi vanhu vangu, teererai mutemo* wangu;Rerekai nzeve dzenyu munzwe mashoko emuromo wangu. 2 Ndichashama muromo wangu ndichitaura chirevo. Ndichataura zvirahwe zvekare kare.+ 3 Zvinhu zvatakanzwa uye zvatinoziva,Zvatakarondedzerwa nemadzibaba edu,+ 4 Hatizozvivanziri vanakomana vavo;Ticharondedzera kuchizvarwa chichauya+Mabasa akakodzera kurumbidzwa aJehovha uye simba rake,+Zvinhu zvinoshamisa zvaakaita.+ 5 Akaisa chiyeuchidzo muna JakobhoUye akagadza mutemo muna Israeri;Akarayira madzitateguru eduKuti aite kuti vana vawo vazive zvinhu izvi,+ 6 Kuti chizvarwa chinotevera,Vana vachazoberekwa, vazvizive.+ Ivowo vozozvirondedzera kuvana vavo.+ 7 Ava vanobva vavimba naMwari. Havazokanganwi mabasa aMwari+Asi vachachengeta mirayiro yake.+ 8 Havazoiti semadzitateguru avo,Chizvarwa chakanga chakaoma musoro uye chaipanduka,+Chizvarwa chakanga chiine mwoyo usina kudzikama+Uye chakanga chisina kutendeka kuna Mwari. 9 VaEfremu vakanga vakapakata uta,Asi pazuva rehondo vakatiza. 10 Havana kuchengeta sungano yaMwari+Uye vakaramba kufamba mumutemo wake.+ 11 Vakakanganwawo zvaakanga aita,+Mabasa ake anoshamisa aakavaratidza.+ 12 Akaita zvinoshamisa pamberi pemadzitateguru avo,+Munyika yeIjipiti, nharaunda yeZoani.+ 13 Akakamura gungwa kuti vayambuke,Uye akaita kuti mvura imire semadziro.+ 14 Aivatungamirira negore masikatiUye usiku hwese nechiedza chemoto.+ 15 Akatsemura matombo murenje,Akaita kuti vanwe mvura kusvikira vaguta sekunge yaibva mugungwa.+ 16 Akabudisa hova dzemvura mudomboUye akaita kuti mvura iyerere senzizi.+ 17 Asi vakaramba vachimutadziraNekupandukira Wekumusorosoro mugwenga;+ 18 Vakaedza Mwari mumwoyo mavo+Vachimuudza kuti avape zvekudya zvavaida.* 19 Saka vakataura zvakaipa nezvaMwari,Vachiti: “Mwari angagona kutipa zvekudya murenje here?”+ 20 Onai! Akarova domboZvekuti mvura yakayerera, hova dzikafashukira.+ “Angagona kutipawo chingwa here,Kana kuti angagona kupa vanhu vake nyama here?”+ 21 Jehovha paakavanzwa, akashatirwa kwazvo;+Moto+ wakabvira ukapisa Jakobho,Uye akatsamwira Israeri kwazvo+ 22 Nekuti havana kutenda muna Mwari;+Havana kuvimba kuti aikwanisa kuvaponesa. 23 Saka akarayira makore ari mudenga kumusoro,Akavhura masuo ekudenga. 24 Akaramba achivanayisira mana kuti vadye;Akavapa zviyo zvekudenga.+ 25 Vanhu vakadya chingwa chevane simba;*+Akavapa chaikwana kuti vagute.+ 26 Akasimudza mhepo yekumabvazuva kumatengaUye simba rake rakaita kuti mhepo yekumaodzanyemba ivhuvhute.+ 27 Uye akavanayisira nyama yakawanda seguruva,Shiri dzakawanda sejecha regungwa. 28 Akaita kuti zvidonhere mumusasa wake,Zvakapoteredza matende ake. 29 Uye vakadya vakazvimbirwa;Akavapa zvavaipanga.+ 30 Asi nhomba yavo yenyama isati yatombopera,Zvekudya zvavo zvichiri mumuromo mavo, 31 Mwari akavatsamwira.+ Akauraya varume vavo vakasimba;+Akawisira pasi majaya aIsraeri. 32 Pasinei neizvi, vakatowedzera kutadza+Uye havana kuva nekutenda mumabasa ake anoshamisa.+ 33 Saka akagumisa mazuva avo semhepowo zvayo inofemwa,+Uye akagumisa makore avo nezvinhu zvinotyisa zvakavawira vasingafungiri. 34 Asi pese paaivauraya, ivo vaimutsvaga;+Vaibva vadzoka, votsvaga Mwari, 35 Vachiyeuka kuti Mwari aiva Dombo ravo+Uye kuti Mwari Wekumusorosoro aiva Mudzikinuri wavo.*+ 36 Asi vakaedza kumunyengedza nemuromo wavoUye vakamunyepera nerurimi rwavo. 37 Mwoyo yavo yakanga isina kuvimbika kwaari;+Uye vakanga vasina kutendeka kusungano yake.+ 38 Asi iye aiva nengoni;+Aivaregerera* kukanganisa kwavo orega kuvaparadza.+ Aiwanzozvidzora pakushatirwa kwake+Pane kuvaratidza hasha dzake dzese. 39 Nekuti aiyeuka kuti vakanga vari vanhu venyama,+Mhepo inongovhuvhuta ichipfuura isingadzoki. 40 Vaimupandukira kakawanda murenje+Uye vaimurwadzisa mugwenga.+ 41 Vaingoramba vachiedza Mwari,+Uye vairwadzisa Mutsvene waIsraeri. 42 Havana kuyeuka simba rake,*Zuva raakavanunura* pamhandu,+ 43 Maratidziro aakaita zviratidzo zvake muIjipiti+Uye zvishamiso zvake munharaunda yeZoani, 44 Uye machinjiro aakaita migero yaNire kuita ropa+Zvekuti vaisagona kunwa mvura inobva muhova dzavo. 45 Akavatumira mbuo* dzakawandisa, kuti dzivarwadzise dzichivaruma+Uye matatya kuti avaparadze.+ 46 Akapa zvirimwa zvavo kumhashu dzinodya dzisingasiye chinhu,Zvavakashandira zvakadyiwa nemhashu dzinobhururuka dzakawanda.+ 47 Akaparadza mizambiringa yavo nechimvuramabwe+Uye mitsamvi yavo nechimvuramabwe. 48 Akauraya mhuka dzavo dzinotakuriswa zvinhu nechimvuramabwe+Uye akauraya zvipfuwo zvavo nemheni.* 49 Akavarova nehasha dzake huru,Nekushatirwa nekutsamwa nekutambudzika,Zvikwata zvengirozi zvichiunza matambudziko. 50 Akavhurira hasha dzake nzira. Haana kuvasiya vari vapenyu;Uye akaita kuti vawirwe nedenda. 51 Akazopedzisira nekuuraya matangwe ese eIjipiti,+Kutanga kwesimba ravo rekubereka mumatende aHamu. 52 Akabva abudisa vanhu vake semakwai,+Akavatungamirira murenje seboka rezvipfuwo. 53 Akavatungamirira vakachengeteka,Uye havana chavaitya;+Gungwa rakafukidza vavengi vavo.+ 54 Uye akavasvitsa kunyika yake tsvene,+Nyika ino ine makomo yakawanikwa neruoko rwake rwerudyi.+ 55 Akadzinga marudzi pamberi pavo;+Akavagovanisa nhaka achishandisa tambo yekuyeresa;+Akagarisa madzinza aIsraeri mumisha yawo.+ 56 Asi vakaramba vachiedza Mwari Wekumusorosoro uye vachimupandukira;+Havana kuchengeta zviyeuchidzo zvake.+ 57 Naivowo vakatsauka uye vainyengera semadzitateguru avo.+ Vakanga vakaita seuta hwakadhamba husingagoni kuvimbwa nahwo.+ 58 Vakaramba vachimugumbura nenzvimbo dzavo dzakakwirira,+Uye vakaita kuti ashatirwe* nemifananidzo yavo yakavezwa.+ 59 Mwari akazvinzwa, akashatirwa kwazvo,+Saka akaramba Israeri zvachose. 60 Akazosiya tebhenekeri yekuShiro,+Tende raaigara ari pakati pevanhu.+ 61 Akarega chiratidzo chesimba rake chichitapwa;Kukudzwa kwake akakuisa muruoko rwemhandu.+ 62 Akasiya vanhu vake vachiurayiwa nebakatwa+Uye akashatirirwa nhaka yake. 63 Moto wakapisa majaya ake,Uye mhandara dzake hadzina kuimbirwa nziyo dzemuchato.* 64 Vapristi vake vakaurayiwa nebakatwa,+Uye chirikadzi dzavo hadzina kuchema.+ 65 Jehovha akabva amuka semunhu anga akarara,+Semurume akasimba+ amuka waini yapera mumusoro. 66 Uye akadzingirira mhandu dzake dzichidzokera kwadzabva;+Akaita kuti vanyadziswe nekusingaperi. 67 Akaramba tende raJosefa;Haana kusarudza dzinza raEfremu. 68 Asi akasarudza dzinza raJudha,+Gomo reZiyoni, raanoda.+ 69 Akaita kuti nzvimbo yake tsvene irambe iripo sematenga,*+Senyika, iyo yaakasimbisa nekusingaperi.+ 70 Akasarudza Dhavhidhi+ mushumiri wake,Akamutora kumatanga emakwai,+ 71 Kwaaifudza nhunzvi dzinoyamwisa;Akaita kuti ave mufudzi waJakobho, vanhu vake,+Uye waIsraeri, nhaka yake.+ 72 Akavafudza nemwoyo wakaperera,+Uye akavatungamirira nemaoko ane unyanzvi.+
^ Kana kuti “zvekudya zvemweya yavo.”
^ Kana kuti “chengirozi.”
^ Kana kuti “Mutsivi wevavengi vavo.”
^ ChiHeb., “Aifukidza.”
^ ChiHeb., “ruoko rwake.”
^ ChiHeb., “raakavadzikinura.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “nefivha.”
^ Kana kuti “anzwe godo.”
^ ChiHeb., “hadzina kurumbidzwa.”
^ ChiHeb., “Akavaka nzvimbo yake tsvene senzvimbo yakakwirira.”